Nabad sugidda Jubbaland oo soo bandhigtay Nin askari ku dilay Kismaayo – Hornafrik Media Network
Nabad sugidda Jubbaland oo soo bandhigtay Nin askari ku dilay Kismaayo
Ciidanka Nabadsugida iyo Sirdoonka Jubbaland ayaa gacanta ku dhigay nin la sheegay inuu askari ku dilay magaalada Kismaayo, kana qaatay qorigiisa.
Sida lagu shaaciyay barta Twitter-ka ee Nabad sugidda Jubbaland, ninka la soo qabtay ayaa la sheegay in habeen ka hor uu si gaadmo ah ku dilay askari lagu magacaabi jiray Maxamed Yare, kaas oo markii uu dilay uu horay u qaatay qorigiisii.
Ciidamada Nabad sugidda ayaa lagu sheegay qoraalka inay dabagaleen ninkaas, waxaana uga dambeyn suura gashay in xalay gacanta lagu soo dhigo, kaddib howlgal socday in ka badan 12 saacadood, sida lagu sheegay qoraalka.
Muddooyinkii u dambeeyay Ciidamada Nabad sugidda Jubbaland ayaa howlgalo ka waday magaalada Kismaayo, iyadoo todobaadyo ka hor gacanta ku soo dhigay shabakad falal amni daro ka waday magaalada oo la sheegay inay dilal ka geysa jireen qaraxyana soo geliyay magaalada.
Madaxtooyada Puntland oo war ka soo saartay colaadda G/Mudug